The Ab Presents Nepal » रबिलाई रमेशले भेटे के के कुरा भने त रविले हेर्नु होस् भिडियो सहित
रबिलाई रमेशले भेटे के के कुरा भने त रविले हेर्नु होस् भिडियो सहित
चितवन -: पत्रकार रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीविच दोहोरो झडप हुँदा डेढ दर्जनबढी घाईते भएका छन । झडपका क्रममा एक जना असईसहित ७ जना प्रहरी र एक दर्जन प्रदर्शनकारी पनि घाईते भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी उश्रृंखल गतिविधि गर्नथालेपछि भिड नियन्त्रण गर्नेक्रममा झडप भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक एक नारायण कोईरालाले बताए । विहानै देखि प्रहरी कार्यालय परिसरमा नारावाजी गर्दै आएका प्रदर्शनकारीहरुले साँझपख अनावश्यक हुलदुङ्गा मच्चाएको प्रहरीले जनाएको छ’ ।
काठमान्डौ , पत्रकार रबि लामिछाने र युबराज कंडेल पक्राउ गरेको घटनालाई लिएर चितवनमा रबि लामिछानेका समर्थक हरुले यो कदमको बिरुद्द बिरोध गरिरहेका छन् । चितवन र देशका बिभिन्न ठाउँ बाट चितवन पुगेका समर्थकले प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।रबि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै चितवन पुगेका रमेश प्रसाइले रबि लामिछाने जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरेका छन् । ‘उनले हिरासतमा मलाई हाल , रबि दाइलाई रिहा गर भन्दै चर्को आवाज उठाएका छन् । चितवनका हजारौ समर्थकका अगाडी रमेशले भने रबिलाई हिरासतमा राख्ने प्रहरीलाई पनि रात भरि निद्रा लागेको छैन’ ।
उनले राष्टभक्त प्रहरीलाई उच्च सम्मान रहेको भन्दै आफु हरु प्रहरी माथि ढुंगा मुडा गर्न नआएको समेत बताए । उनले भने हिजो रबि लाई हिरासतमा राख्न फैसला गर्ने न्याधिशले आफ्ना छोराछोरी संग आखा कसरि जुदाए होलान ?हामिलाई अन्धभक्त भन्ने गरिन्छ के हामीलाई रबि लामिछानेले पट्रोल खर्च हाल्दिएर आएको हो’ ? के हामी हिजो नेताले चुनाबताका मासु भात खुवाय जस्तै गरि आएको हो ? हामी नितान्त रबि लामिछानेको लागि न्याय माग्न आएका हौ’ ।’रबि लामिछाने समर्थकले कसैले मोटरसाइकलमा तेल हालेर वा कसैको पैसा खाएर आफुहरु सडकमा निस्केको नभई स्वतस्फुर्त आएको बताएका छन् ‘।